Fiainana kamboty :: Miaina toy ny rehetra ireo ankizy beazina eny Tangaina • AoRaha
Fiainana kamboty Miaina toy ny rehetra ireo ankizy beazina eny Tangaina
Fikambanana mitaiza ireo zaza kamboty eo anelanelan’ny dimy hatramin’ny iraika ambin’ny folo taona ny Akany Fialofana Tangaina na “Aka.Fi.Ta” eny Ampitatafika. Na kamboty aza anefa izy ireo dia miaina toy ny rehetra ihany. Nahazo ampaham-potoana nankalazany ny krismasy 2019, nandritra ny fanompoam-pivavahana ny alahady 22 desambra, tetsy amin’ny FJKM atsimon’i Mahamasina, izy ireo. Nisy ireo natao batisa, ny maraina, nandritra ny fanompoam-pivavahana. ny tolakandro, nijery maimaim-poana ny fampisehoana ny antoko mpihira ampifitia, tao amin’ny fiangonana FJKM Andavamamba Kristy Velona izy ireo. Ny vola azo tamin’ny valopy ho solon’ny fidirana tamin’ny fampisehoana dia natolotra manontolo ny akany.
Fankalazana toy ny an’ny rehetra. Tato anatin’ny sivy taona farany, mankalaza ny Krismasiny tetsy amin’ny FJKM Atsimon’i Mahamasina ny ankizy beazina ao amin’ny akany Fialofana Tangaina na “Aka.Fi.Ta” eny Ampitatafika. Amin’ny fanompoam-pivavahana toy izao dia ireo ankizy tezaina ihany no manao ny raharaha rehetra. Nitarika ny fanompoam-pivavahana, Razananiraka Rinah Fihavaozana, tovovavy ao amin’ny Akany. Lohahevitra novahavahana sy
nampaherezana an’ireo ankizy maherin’ny telopolo, nandritra izany, ny tao amin’ny bokin’ny Ohabolana 14, andininy 26b: “Ary ny zanany hahazo fialofana”.
Nisy tamin’ireo ankizy no nohararaotina natao batisa ka isan’ireny Andrianasaina Fenosoa Linah, zazavavy fito taona, sy Mandresiharijaona Anjaratiana Sylvio, zazalahy dimy taona. Tsianjery sy dihy mirindra ary tantara an-kira no nataon’ireo zaza kamboty tao anatin’ny dimampolo minitra, nandritra ny asa vavolombelona. Fanampiana maro no natolotry ny sampana velona ao amin’ny FJKM Atsimon’i Mahamasina ho an’ny Akany.
Kamboty am-polony maro
Enimpolo taona mahery no nisahanan’ny fikambanana Protestanta mpanao soa ny akany, eny Ampitatafika.
Natolony hotantanan’ny foibe FJKM, ny volana mey 2018. Ankehitriny, niova anarana ho akany Fialofana Tangaina na “Aka.Fi.Ta”. Mandray zaza kamboty dimy ka hatramin’ ny iraika ambin’ny folo taona, lahy sy vavy ary tsy misy
fetran-taona ny fialany ao amin’ny Akany.
Hatreto, roa amby telopolo mianadahy no beazina ao amin’ny Akany, kilasimandry. Telo mianadahy no misahana ny fampandehanan-draharaha. “Ny vadinay avy no manampy rehefa misy zavatra hatao ka mila fanampiana”, hoy Rasoarivelo Beby Hasina, talen’ny Akany, mahatsiaro ho sahirana noho ny tsy fahampian’ny olona mampihodina ny Akany.
Mianatra any ivelan’ny Akany avokoa ny zaza beazina. Iantohana ny saran-dalana sy ny solon-tsakafo antoandro ho an’ireo ankizy mianatra aty an-drenivohitra. Manaraka lalam-piofanana BTP etsy amin’ny LTP Mahamasina,
i Fanantenana Tsinjo, tovolahy 16 taona. Niditra tao amin’ ny Akany izy, ny taona 2015. Nodimandry tamin’ny taona 2013 ny rainy ary ny taona 2018 ny reniny. “Ny mpiara-mivavaka taminay teny Ivato no nanoro hevitra ny reniko ny hampiditra anay telo mirahalahy tato amin’ny Akany. Tsy vitany intsony ny namelona anay. Nitambesatra loatra taminy ny fahoriana dia nanara-dia ny rainay koa izy. Kamboty tanteraka izahay izao kanefa eo izy mivady mpitantana ny Akany, ka tsy mahatsiaro fa irery izahay”, hoy i Fanantenana Tsinjo, izay tsy hita taratra amin’ny endriny ny mahakamboty azy amin’izao fotoana ankatoky ny fety izao, tamin’ny tafatafa natao taminy.
Adidy mavesatra ny miandraikitra ankizy miisa roa amby telopolo. Ankoatra ny lafiny ara-batana, mibahana kokoa amin’ny fitaizana ny lafiny ara-panahy. “Mianatra sekoly alahady ny ankizy. Taratry ny fitaizana ao amin’ny Akany ny fitarihan’i Rinah ny fanompoam-pivavahana teto amin’ny FJKM Atsimon’i Mahamasina, androany. Fotoana fohy ihany no namerenana ireny dihy sy tsianjery nataon’ny ankizy teo ireny”, hoy Randrianaivoarivelo Rado Bera, Talen’ny famatsiam-panahy na “aumônerie” FJKM, vadin’ny Talen’ny Akany.
Mifampitondra toy ny ray aman-dreny sy ny zanaka ny ao amin’ny akany Fialofana Tangaina na “Aka.Fi.Ta”. Amin’izao Krismasy dia niezaka ny Akany hampitovy ny fitafiana sy ny kiraro ny zaza beazina. “Nisy olona malala-tànana nanome lamba hanaovan’ireo ankizy sy vola hividianana kiraro. Nisy fahatapahan-jiro tany amin’ilay mpanjaitra dia nisy tsy vita ny akanjon’ny ankizy sasany. Hoezahinay ny hanaovanay akanjo mitovy mba hanomezana fahafaham-po ho an’ny mpanolotra”, hoy hatrany ny talen’ny Akany.
Tapany maraina, nivavaka sy nankalaza ny fetin’ny Krismasy tao amin’ny FJKM Atsimon’i Mahamasina. Ny tolakandro, nijery maimaim-poana ny fampisehoana ny antoko mpihira Ampifitia tao amin’ny Fjkm Andavamamba Kristy Velona. Sivy taona nifanesy, nisy hatrany ny fiaraha-miasa teo amin’ny Aka.Fi.Ta sy ny Ampifitia. “Ny vola azo amin’ny raki-balopy iray manontolo dia atolotray ho an’ny Akany. Lehibe noho izao no homenay ny Akany amin’ny taona ho avy, izay feno folo taona ny fiaraha-miasa”, hoy Rakotonirina Jean de Dieu, filohan’ny antoko mpihira Ampifitia. Nahatratra dimy alina sy fito hetsy ariary, mahery, ny vola azo.
Tapitra noteteziny nohirain’ny antoko mpihira Ampifitia ireo raki-peo sy an-tsary folo mahery efa navoakany.
Manaraka sy miara-mihira amin’ny Ampifitia tamin’ireo hira tsy afaka am-bavan’ny mpijery, afa-tsy ireo hira vaovao izay tsy mbola hainy.
Nentina nijery ny jiro teny Antaninarenina ary Analakely ny harivan’ny alahady 23 desambra ny ankizy. Nisy malala-tanana nanome fiara be nitondra ny ankizy niala teny Ampitatafika ka hatraty an-drenivohitra.
Tolo-tanana avy amin’ny malala-tanana no mamatsy sy mampihodina ny Akany ankoatra ny rakitra hataon’ny fiangonana Fjkm manerana ny Nosy, isaky ny faran’ny volana aogositra.
Antso avo no nataon-dRasoarivelo Beby Hasina, talen’ny akany Fialofana Tangaina na “Aka.Fi.Ta” amin’ny fanampiana tolo-tanana fa adidy mavesatra ny miandry amin’ny fampandehanana isan’andro ny Akany. Ny laharana 034.99.060.02 sy ny banky BOA N° 1100.111.0295 no hahazoana manampy ny Akany.
Fanadinam-panjakana Hatao amin’ny volana aogositra ny Bakalorea 2020
Fanatsarana ny fanabeazana :: Toherin’ny sekoly tsy miankina indray ny hevi-dehibe ao amin’ny PSE
Fitsinjovana ireo marefo :: Nanome fitaovana fameloman-jaza ny fikambanana Fitia